Tuesday May 05, 2015 - 13:25:18 in Maqaallo by Super Admin
Kaas oo sida laga wadaa-war qabbay muddo uu khilaaf ba’aani uu dhexeeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Cabdilahi Cukuse iyo Maareeyihii hore Tv-ga Khadar Gaas. Kuwaas oo muddo Geeska iskula jiray kaddib daan-daansi iyo faro gelin uu ku waday wasiir Cukuse oo doonayey inuu meesha ka dhiggo sidii meherad uu leeyahay oo kale dadkuna isaga u shaqeeyan. Iyadoonay kow iyo laba toonna ahayn intaa ay dheggaha shacabku maqleen Khilaaf ayaa ka dhex jiraa wasaaradda warfaafinta Somaliland. Balse waxay ahayd mid waqtii dheer soo jiitameysay, soona martay marxalaaddo kala duwan iyo Duruuffo kala geedisan. Kuwaas oo leh xusuustooda iyo waya-hoodaba.
Waxa Hubaal ah inay wasaaradda warfaafinta Somaliland, la kow-satay Khilaafkeeddu mudadi ay jirtay Xukuumadda Kulmiye oo sammeysatay dheggo badan kuwaas oo aan shaqo kale, uu tagin wasaaradda warfaafinta inay xan soo dheggo dheegeeyaan mooye. Waxana da’lil cadaan ah oo jirta mudadii uu Madaxweynaha ahaa Axmed Maxamed Siilaanyo. Inuu mar walbaa sababa kaliffa inuu wasaaradan Khilaaf ka dhasho uu door ku lahaa wasiirka hadda wasaaradda Hoggaamiyo oo Bulshaddu intaa badan uu taqaanno aabaha Xasaaradda iyo xinka.
Mararkaas oo uu wasiir Cukuse ahaa mar Af-hayeenka Madaxtooyada hadana kamma madhneyn xudunta Khilaafyadaas oo waxa markhaati ahayd markii uu madaxweyne siilaanyo uu magacaabay Muj boobe Yuusuf Du’caale wasaaradaas sidii uu xuntanka iyo xasaaradda joogtada ahayd-baa ee uu ku bilaabay.
Hadaba xallay markii uu Madaxweyne siilaanyo soo saaray war-qadda shaqo ka eriska ah ee Khadar Gaas waxa billaban-tay dood Bulshda ku dhex martay bar kulanka Face-booka iyo Twitter-ka kuwaas oo dhamaantood isku raacay in aannu madaxweyne siilaanyo asiibin Xilka qaadista Khadar Gaas. Balse laga lahaa. Waxanay intooda badani farta ku fiiqayeen dhinaca wasiirka wasaardaas oo ay dadku ku xidhiidhiyen sababal nasiilka Khilaafyada Wehelka la noqday wasaardaas.
Halka doodaha ay dadka qaarna qabbeen inay habooneed in la is raaciyo labadooda-ba Oo anay kala hadhin. Waxa kuwaas ku lammaana oo iyana jirtay oo dadka qaarkood qabbeen inay wasaaradda warfaafinta habooneyd in masuul looga dhigo qof qun-yar socod ah oo aan ahayn Xasaarad wade sidaa wasiirka oo kale la soco qaybo kale.
Cabdi casiis Bashiir Nor